Yintoni ongayenza xa ungaqondi ukuba ngubani onothando kuwe, kwaye ngubani onothando kuwe? Kuthekani ukuba ulwalamadoda amabini? Ungakhetha njani igama kwaye ungenzi iphutha?
Amanye amantombazana acinga ngalo mbuzo kwaye, mhlawumbi ungowabo. Emva koko makhe sithethe malunga nendlela ofanele ukuphuma ngayo kwimeko, obangela intlungu encinci kulabo abakujikelezile.
Okokuqala, makhe sibone ukuba kutheni udibana nabafana ababini, kwaye emva koko sizame ukuphendula into enokuyenza xa udibana nabafana ababini.
Ngoko, mhlawumbi inyaniso kukuba xa wathandana nomfana, kodwa uthando lwadlula kwaye wadibana nelinye. Ngoku uziva uxolo ngothando lwakho olulahlekileyo kwaye awukwazi ukuluyeka ukuze ungabangeli intlungu. Kodwa, eneneni, sele ufune ukuba nomntu omtsha, obonwa ngalo uthando olugqibeleleyo.
Kule meko, bonke abathathu bahlupheka. Wena - kuba uhlupheka ngenxa yokuzisola. Umfana wakho ongeyithandi, uvakalelwa, uziva, kwaye unomona ngenxa yokungakwazi kwakhe. Yaye uthando lwakho olutsha alukwazi ukuvuma ukuba kufuneka akuxelele nomntu ongeyena mfuneko.
Kwimeko efanayo, usadinga ukuhlukana nobudlelwane obuye buthathaka. Ngokuqinisekileyo, akukho mntu uthi kuya kuba lula, kodwa akukho ndlela enye ngaphandle. Kufuneka ukhumbule ukuba xa uqhuba, uphakame amathuba okuba ulahlekelwe ngabafana, kuba omnye nomnye akakwazi ukuma ulwalamano olunjalo kunye nobuxoki obunjalo. Kufuneka ukuba uthethe kanye, uchaze yonke into kwaye ukhulule umntu owayengumntu. Nangona ucela ukuba amnike ithuba kwaye uthembisa ukutshintsha yonke into, ungavumelani nayo ngenxa yenceba. Konke okufanayo, uya kulwahlula, kodwa kuya kuba nzima nakwezinye iintlungu.
Kukho neemeko xa umfana engavumeli ukuba ahambe, usongela aze asongele. Kule meko, kufuneka ufumane amandla kwaye ucele uncedo. Unokumkhusela kwintando yakho entsha, abahlobo, izalamane, kwaye, mhlawumbi, i-arhente yokunyanzeliswa komthetho. Iimeko ezinjalo zinokuba yingozi kwimpilo yakho nangobomi. Ngoko unganqikazi ukuqhagamshelana nomntu uncedo. Hlalani nikhumbula ukuba abantu abasondeleyo baya kukunceda kwaye bakuxhase nayiphi na imeko.
Kukho ezinye iimeko apho intombazana, ngokuthethileyo, ziphakathi kwemililo emibili. Umzekelo, kunokuthi kwenzeke ukuba ulwalamano nolutsha, intombazana, ngokukhawuleza iqala ukuba nomdla kwenye. Nangona kunjalo, akakwazi ukuthetha ukuba wayeka ukuthanda isoka lakhe. Uyamthanda, uyamxabisa kwaye akafuni ukuyeka. Kodwa le nto ivakalelwa ngayo, kwaye, ngokubaluleke kakhulu, yintoni enokuyenza nabo?
Ukuba ukhona kule meko, ngoko, mhlawumbi, ungekho nto eyaneleyo kwintsebenziswano kunye nentsha. Ukuba udibana sele udele ngokwaneleyo, loo ngqumbo yokuqala iyanyamalala, uyazi omnye njengomnye kwaye ubuhlobo buqala ukubonakala ngathi buqhelekileyo. Kule meko, ngokuqhelekileyo, amantombazana anika ingqalelo kwabanye abafana abambelela ekukhanyeni kwabo nokungaqiniseki. Ukuba le meko ivele ebomini bakho, cinga malunga nokuba ukulungele ukunikela ubungqina besikhathi eside ngenxa yothando lomfutshane. Ngokuqhelekileyo, aba bantu baxakeka ngokukhawuleza, kwaye loo ntokazi ifuna emva, kumntu onokuthula kunye naye onokuzithemba. Kodwa kwenzeka ukuba insizwa yakho ifunde ukukhohlakele, kwaye uya kulahlekelwa ngonaphakade. Cinga ngento eyenzekayo kuwe, laphula iimvakalelo zakho. Mhlawumbi ufuna nje ukuzama ukutshintsha into ebudlelwaneni bakho kwaye ulethe imibala ebomini. Thetha kwintombi yakho, xubusha imeko (anditsho ulwalamano lwakho nomnye umntu osemfana, kodwa isenzo kwimbini yakho). Chaza oko ufunayo uze uzame ukusombulula ingxaki kunye. Ukuba umfana uyakuthanda, uya kuhlala ezama ukuqonda nokukunceda. Mhlawumbi naye ubona iimpazamo zakho. Mamela kwaye uqonde indlela yokuphuma kwimeko. Khumbula ukuba uthando lokwenene lunokunqoba yonke into. Ngako oko, zama ukungazilibali kwaye uhlonele iimvakalelo kunye neminqweno yenkwenkwe yakho. Kwaye kunye nensizwa enokukunika ezo zipeyinti, kukulungele ukukhawuleza ulwalamano. Chaza imeko kuye kunye nethemba lokuqonda. Into ephambili kukuba akanalo ixesha lokuthandana. Inyaniso kukuba ukunyaniseka kuya kumkhohlisa kwaye ngeke kumvumele ukuba aphile ngokuqhelekileyo kwaye akhe ubuhlobo ixesha elide. Ngoko ke, zama ukuphula bonke oonxibelelwano uze umvumele aphile ubomi bakhe. Into eyona nto kukuba ayiyi kuba yinto yokuba intsha ingaba ngumntu onobungozi obunokutshabalalisa ubomi bakho ngenxa yokufezekisa injongo. Kwimeko enjalo, kungcono ukuxelela ngokukhawuleza yonke iqabane lakho kunye nethemba lokuxolela. Ayikho enye indlela ephuma kuyo.
Imeko xa ibhinqa linxulumene nabantu abancinci ababini, eqinisweni, luchukumisa kwaye lubuhlungu kuyo yonke imibutho. Kungekudala okanye emva koko, inyaniso ihlala ivela, kwaye ke siqala ukulahlekelwa ngumthandayo. Kungenxa yoko, ukuba uyazibuza ukuba wenzeni ukuba udibana nabafana ababini, cinga ngendlela ebalulekileyo ngayo ubuhlobo obunjalo. Mhlawumbi awuthandanga omnye okanye omnye, kwaye uzama ukuhlawula umntu omnye? Kule meko, qonda ukuba le ndlela ayiyi kusebenza. Kungokuthi akukho namnye kubo omele akulandele. Akuyiyo ikusasa lakho. Kwaye ukuze ube nolonwabo, kuyimfuneko ukudibana nomfana omfana oza kukunelisa kuyo yonke into. Ukuba sele esondele, awuyi kufuna ukujonga umntu ohlangothini ukuzalisa izikhala. Emva kwakhe kuphela, nayiphi intombazana ivakalelwa kwaye ikhululekile. Unako ukukwazi ukufumana imvelo kwaye uyonwabile. Ngoko ungathathi imali. Ulonwaba ebuhlotsheni lunokuthi luvelise umgangatho. Musa ukulibala malunga nayo kwaye yonke into iya kuhamba kakuhle ebomini bakho.
Uthando lwabantu kunye neentlobo zalo: i-agape, i-ludus, i-eros, i-mania, i-pragma, i-storge
Iimpawu zamadoda aseArabhu
Imfihlelo yabasetyhini: yintoni amadoda angafanele azi ngayo
Umntu olungileyo okanye ulungile?
I-Code Business Dress Code
Iikroti ebusika - zokupheka ezimnandi kakhulu kwiibhanki - kwisiKorea, i-lecho, i-salads ekhethiweyo. Indlela yokugcina imifuno ekhaya
Indlela yesiFrentshi nesiNgesi yale ntombazana
Iikotiti zekrotrot nge coriander kunye nengqolowa
Ulwakhiwo lwenkqubo yemfundo eRashiya
I-zucchini ephosiweyo kwisitayela saseLigurian
Indlela yokunceda umntu emva kokuhlukana nomthandayo
Umtshato wegolide: yakha ubutyebi
Isaladi yesatato ebusika